Iipatio Kunye Needeksi | Etimnga 2021
Isoftware eyi-15 yeDisk Design (yasimahla kunye neNtlawulo)
Iinkqubo ezili-15 zesoftware yoyilo olusimahla (simahla kunye neNtlawulo) zokukunceda wenze indawo yakho yokuhlala engaphandle. Yenza indawo esemva kwendlu, jonga izinto ezifunekayo kunye ..
I-Azek vs Trex Decking (i-Pros kunye ne-Cons kunye nesikhokelo soYilo)
I-Azek vs Trex isikhokelo sokuyila ngobuchule kunye neengozi, umahluko kwizixhobo zomgangatho kunye nexabiso. Jonga ukuba iTrx okanye iAzek yeyona nto ilungele ikhaya lakho.
Iingcamango zePatio Wind Block (Izikrini, iiShadade kunye neeDeflectors)
Imibono yebhloko yomoya wepatio ngendlela yokuvimba umoya usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zoyilo. Jonga uluvo lwendalo kunye noluphathekayo lokuthintela izimvo zepatio yakho.
Ukutywinwa kweeNzuzo kunye neNgxaki
Isikhokelo sokutywina i-pavers pros kunye ne-cons kunye nokuba kutheni bafuna ukutywinwa, indlela-kunye nemibuzo ethandwayo malunga nokutywina ipatio yakho.
Isikhokelo sokuyilwa kwengca eyenziweyo yengca enobuchule kunye neengozi, iindleko kunye neentlobo ezilungileyo zepatiyo yakho, iveranda okanye ibhalkhoni. Jonga iingcinga zepatio yengca ezingeyonyani.
Isikhokelo sokugqibela kuyilo lomgangatho kubandakanya izitayile ezithandwayo, izixhobo, iindleko kunye neengcebiso ekudaleni indawo yakho yangasemva kwendlu. Jonga imifanekiso yeembono zedesika kunye ...
Ispain Tile Patio (Iindidi kunye neMibono yoyilo)
Isikhokelo sepatio yethayile yaseSpain enezitayile ezithandwayo ezinje ngeterracotta, iSaltillo kunye nemibono yoyilo yezandla. Jonga iithayile zepatio zaseSpain.
I-PVC vs Decking edibeneyo (Umahluko kunye neProses kunye neNgxelo)
Isikhokelo se-PVC vs ukudityaniswa kokudityaniswa kunye nokulunga kunye nokungabikho, ukwahluka kweendleko, iwaranti kunye nokuba zeziphi iintlobo ezilungileyo. Fumana imibono edibeneyo kunye nePVC
Imibono yePatio edibeneyo (Imifanekiso yoyilo)
Igalari yezimvo zepatio ezifakiweyo kubandakanya indleko, amanqaku kunye nezitayile zoyilo. Jonga imifanekiso yamagumbi okulala elanga, amagumbi ama-3 no-4 onyaka kunye neendidi zeepatio ezibiyelweyo.
Epoxy Patios (Iindidi ze-Epoxy Flooring)
Isikhokelo kwii-epoxy patios kubandakanya nokuba yintoni, iintlobo zomgangatho we-epoxy kunye neendleko. Khangela ukuba i-epoxy phantsi iyona nto ibaluleke kakhulu kwi-patio yakho yangasemva
I-Deck Paint vs Stain (Iindidi, Ukuqina kunye nesikhokelo seNdleko)
Ipeyinti yedesika vs isikhokelo sendawo kunye nokhetho olufanelekileyo lokuhlala kunye neendleko kunye nohlobo lwepeyinti okanye ibala oza kulisebenzisa. Ngaba kufuneka usebenzise i-deck stain okanye ipeyinti?
Isitampu sePatio yeKhonkrithi (Iingcamango zoyilo)
Igalari yoyilo lwekhonkrithi eprintiweyo kubandakanya izitena, ilitye leflegi, ilitye lembombo kunye nemibono yesilayidi yamaRoma. Jonga imifanekiso yesitayile sekhonkrithi esitampu, imibala kunye neemilo.
I-Patio ehlanganisiweyo ebonakalisiweyo (i-Pros & Cons kunye neeYilo)
Ukuboniswa koyilo lwepatio ehlanganisiweyo kunye neenzuzo kunye neengxaki, iindleko kunye neengcebiso zokugcina. Jonga ukuba ipatio ekhonkxiweyo yeplastikhi ilungele ikhaya lakho.
I-TimberTech vs Trex Decking
Isikhokelo kwiTimberTech vs Trex Decking kubandakanya eyona yomeleleyo, indleko kunye newaranti. Jonga i-Trex kunye neTimbertech pros kunye neengozi kunye nokuthelekisa.
Uyilo lwegalari yemibono emangazayo yokuthuka. Jonga imifanekiso yeenkuni, zesinyithi kunye neenkqubo zomgangatho wokudibanisa uyilo loyilo lwasemva kwendlu yakho.
Isikhokelo semithi yesundu ebiyelweyo kwipatio yakho kunye neentlobo ezilungileyo zokuyilwa kwepatio enelanga kunye nelanga. Jonga imifanekiso yemithi yesundu eyadini yakho
I-Azek vs Trex yokukhangela isikhokelo sokuyila kunye nokulunga kunye nokungahambi kakuhle, umahluko kwizixhobo zomgangatho kunye nexabiso. Jonga ukuba iTrx okanye iAzek yeyona nto ilungele ikhaya lakho.
Iingcamango ezingama-25 zeBrick Patio Design
Ukuqokelelwa kweengcamango zoyilo lwezitena. Le mifanekiso yeepatio ezisemva kwendlu zibonisa izitena, iipavile kunye noyilo lweflegi yeengcinga kunye nenkuthazo yekhaya lakho.
I-Pavers vs Patio yeKhonkrithi (i-Pros & Cons kunye nesikhokelo soYilo)
Isikhokelo sokuyilwa kwesikhonkwane sekhonkrithi kubandakanya isikhombisi kunye neengozi, iindleko kwaye yeyiphi eyona ilungele ukuhlala ixesha elide, ukugcinwa kunye nokufakwa.
Ukutshintsha kwegama kwiflorida emva komtshato
unganxiba ijini emtshatweni
Umama womfazi onxiba umbala wokuziphatha
indlela yokucoca umsesane wedayimane omhlophe
amakhonkco akhe camo